Dr. Gaboose Oo Eedo Kulul U Jeediyey Madaxweyne Siilaanyo Iyo Xukuumadiisa | FooreNews
Home wararka Dr. Gaboose Oo Eedo Kulul U Jeediyey Madaxweyne Siilaanyo Iyo Xukuumadiisa
Dr. Gaboose Oo Eedo Kulul U Jeediyey Madaxweyne Siilaanyo Iyo Xukuumadiisa
Hargeysa (Foorenews)- Gudoomiyaha Urur Siyaasadeedka UMMADDA ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa Xukuumada Somaliland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Md. Axmed Maxamed Siilaanyo ku dhaliilay in aanay ka Go’nayn Qabadashada Doorashooyinka Deegaanka oo qabashadoodu mudooyin badan ay dib u dhacaysay.
Dr. Gaboose ayaa waxa kale oo uu xusay in Madaxtooyada Somaliland ay ku lugleedahay Musuqmaasuqa ragaadiyey Dawladaha hoose ee Dalka, waxa uu sheegay in Madaxweyne Siilaanyo uu doonayo in uu samaysto Mudo kordhin aan sharci ahayn.
Gudoomiyaha ururka UMMADA Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa uu arimahaasi kaga hadlay shir Jaraa’id oo uu maanta Hargeysa ku qabtay kana akhriyey war-saxaafadeedkan oo u dhignaa sidan:-
“Doorashada dowladaha hoose waa tan ugu muhiimsan uguna baaxadda weyn doorashooyinka dalka ka dhaca. Waa seeska Dimuqraadiyadda Somaliland. Fursadna u ah muwaadin kasta oo hiigsanaya himiladiisa siyaasadeed. Waxaa doorashadan ka abuurma xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo saddexda Xisbi Qaran, waxayna gogol xaadh u tahay doorashada Madaxtooyada.
Waxa nasiib-darro ah, in doorashadii dawladaha hoose ee ugu horeysey uguna danbeysey ay ka qabsoontay dalka 2002-dii (toban sano ka hor), taasoo laga dheehan karo inay muddo dheer golayaasha deegaanku ku fadhiyaan, kuna maamulaan dalka sharci-darro.
Waxay noqdeen aalad u nugul musuqmaasuqa iyo in looga taliyo Qasriga Madaxtooyada, taasoo ka saartay meesha madaxbanaanidoodii iyo la xisaabtankii dadweynaha.
Sida caadada u noqotay doorashooyinka Somaliland, kuwan iyo kuwii horeba, madaxda dalalka musuqmaasuqu aafeeyey, kalsoonina aan ku qabin shacbigoodu inay markale soo doortaan waxay cimri-dherer ka dhigtaan xaalad abuur, dhaqaale la’aan, qabyo-tir sharci IWM.
Doorashada dawladaha hoose oo qabsoomi weydaa waxay sababaysaa in ta Baarlamaanku iyaduna dib u dhacdo, go-goldhigeeduna yahay in doorashada Madaxtooyada si ula kas ah loo qorsheeyey inay dib u dhacdo, taas oo dhibi jirtey Madaxweyne Siilaanyo waqtigii uu mucaaradka ahaa.
Mudane Madaxweyne, waxay bulshadu xog-ogaal u tahay muhiimadda gaarka ah ee aad siinaysid wadahadalka Somaliya iyo Sheikh Shariif, balse waxanu tuhunsannahay, iskabadaa dedaale, inaad dooneyso in doorashadu dib u dhacdo, si aad maalmo sharci-darro ah mustaqbalka u sii joogtid. Waxana markhaati ka noqon doona, adigoo adeegsanaya awoodaada Dastuuriga ah, inaad wax-ka-bedel ku samayso diidmada labada gole oo ah inta qudha ee doorashadu u xaniban tahay, taasoo si degdega lagaaga sugayo inaad u soo af-jartid, si jedwalka doorashada ee komishanku qorsheeyeen uu u noqdo mid midho dhala. waxaad dhawr jeer iclaamisay inay doorashada dowladaha hoose dhacayso sannadkan 2012-ka gudihiisa, umadduna waxay kaa sugeysaa inaad ka dhabaysid.
Waxay bulshadu xasuusantahay ka soo guryo-noqoshadaadii Dubai, inaad heshiiskii idin dhex maray adiga iyo Sheikh Shariif kaga sharci gareysey labada aqal mudo saacado gudohood ah, mudnaanta ay kuu lahayd awgeed.”
Previous PostTaliyaha Booska Somaliland Oo Faahfaahin Ka Bixyey Diray Cusub Oo Ciidanka Loo Sameeyey Kana Hadlay Arimo Kale Next PostMadaxweynaha Somaliland oo magacaabay Wasiirul dawlaha Arrimaha Nabadeynta Gobolada bari Ee Dalka